Nyaya yeBumbiro reMitemo Yotemesa Musoro Hurumende yeMubatanidzwa
Nyaya yekunyorwa kwebumbiro remitemo inenge yonetsa sezvo pasina kuwirirana kuti potorwa gwara ripi rekupedza bopoto ravepo zvichitevera gwaro idzva reZanu-PF rairi kuda kuti ritambirwe kuitira kuti gwaro rekutanga rivandudzwe.
Gwaro rekutanga rakanga ratenderanwa nemapato pasi peCOPAC. Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vaudza Studio 7 kuti mutungamiri webato ravo, VaRobert Mugabe, ndivo vapihwa basa nebato rekuona kuti zvariri kuda zvatambirwa.
VaMugabe vakapa gwaro rebato ravo neChipiri kumutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, mutungamiri weMDC diki, VaWelshman Ncube, pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, avo vanoti vanotungamira chimwe chikwata cheMDC diki.
Zviri kudiwa neZanu-PF kuti zvivandudzwe zvinosanganisira nyaya yekubvsa zvekuendesa masimba kumatunhu, kuramba kuti vanhu vapihwe kodzero dzekuva zvizvarwa zvezimbabwe nedzimwe nyika, kana kuti dual citizenship, kubvisa komisheni yezvekuregererana.
Bato iri riri kudawo kubvisa nyaya yekuti mutungamiri wenyika apinde musarudzo nevatevedzeri vaviri, kudzora masimba emutungamiri wenyika, uye kusiya matare nehofisi yemuchuchusi ari zvaanga ari pasina kuavandudza.
Asi VaNcube vashora zvikuru zviri kutaurwa neZanu-PF vachiti zvinoratidza kusaremekedza mamwe mapato.
Vatiwo Zanu-PF iri kuita izvi kuti mamwe mapato arambe kuti zvibve zvanzi zvebumbiro idzva zvaparara poitwa sarudzo pasi pebumbiro riripo iko zvino.
Asi VaNcube vati zviri nani hazvo kuti paitwe sarudzo pasi pebumbiro riripo pane kutambira zviri kudiwa neZanu-PF.
Munyori mukuru muMDC-T, VaTendai Biti, vanotiwo bato ravo harisi kuzotambira zviri kubva kuZanu-PF.
Asi komiti yavo inoona nezvekufambiswa kwemabasa ebato, ye Standing Committee, yasangana Chitatu kuti izeye nyaya iyi.
Muzvisungo zvayo kuMaputo, SADC yakati mutongi gava panyaya yeZimbabwe, VaJacob Zuma, vapindire sezvo nguva iri kufamba pasina bumbiro riri kubuda.
VeMDC vari kutambira danho iri asi veZanu-PF vari kuramba.
Gurukota rezvebumbiro remitemo nemabasa eparamende, VaEric Matinenga, vanoti Zanu-PF yave kudzokera kumashure.
Sachigaro weNational Constitutional Assembly, Muzvinafundo Lovemore Madhuku, avo vari kupikisa chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva, vanoti zvinonetsa kuti vezvematongerwo enika vanyore bumbiro remutemo vega.
Hurukurp naVaEric Matnenga